दुःखको बेलामा पनि हाँस्नैपर्ने, हसाउँनैपर्ने हुन्छः बल्छी धुर्वे| Nepal Pati
दुःखको बेलामा पनि हाँस्नैपर्ने, हसाउँनैपर्ने हुन्छः बल्छी धुर्वे
मरिचमान श्रेष्ठ अर्थात (बल्छी धुर्वे) नेपाली हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा नौलो नाम होईन । ‘जिरे खुर्सानी’ नामक टेलिसिरीयलबाट कलाकारिता सुरु गरेका उनी पछिल्लो समय चर्चित टेलिसीरियल “मेरी बास्सैको” स्क्रीप्ट लेख्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट सम्हालिरहेका छन् । स्कुले जीवनदेखि नै कलाकारितामा लागेका श्रेष्ठसँग नेपालपाटी डट कमका लागि एलीना कार्कीले गरेको कुराकानी ।
स्कूलदेखि नै कार्यक्रमहरू गरिन्थ्यो । धेरै प्रोग्रामहरूमा फस्ट नै हुन्थँे, कार्यक्रममा राम्रोे गरेको देखेर मेरो घरपरिवार, छरछिमेक, साथीभाई, नातागोता सबैले हौसला दिनुहुन्थ्यो ।
तपाई वास्तविक नामभन्दा पनि (बल्छी धुव्रे) नामले चिनिनुहुन्छ । यो टाईटल कसले राखिदिनुभयो ?
हो, मेरो वास्तविक नाम मरिचमान श्रेष्ठ भए पनि चलिआएको चलन भनेजस्तै क्यारेक्टरलाई चिनाउन सीताराम कट्टेल (धुर्मुस), केदार घिीिरे (माग्ने बुढा) भएजस्तै मेरी बास्सैको क्यारेक्टरमा मलाई केदार घिमिरे दाईले टाइटल (बल्छी धुर्वे )राखिदिनुभयो । आज मलाई आम दर्शकहरूले यही नामले चिन्नुहुन्छ ।
कुन–कुन टेलिसिरियलमा अभिनय गर्नुभएको छ ?
मैले सबैभन्दा पहिले अभिनय गरेको टेलिसिरियल ‘जिरे खुर्सानी’ हो , तर त्यसमा सानो भूमिका मात्रै थियो । पछिल्लो समय ‘खासखूस’ टेलिसिरियलमा पनि गरेको छु । तर मलाई चिनाउने भनेको ‘मेरी बास्सै’ नै हो ।
कति वर्षअघि सुरु गर्नुभयो कलाकारिता ?
मैले व्यवसायिक रुपमा कलाकारिता पेसा अँगालेको दश बर्ष भयो । स्कुल पढ्दा देखि नै मैले अभिनय सुरु गरेँ । एसएलसी पास गरेपछि मैले ललितकला क्याम्पसमा कलाकारिता पढेँ ।
हसाँउने काम गाह्रो छ भनिन्छ, के साँच्चै तपाईलाई पनि गाह्रो लाग्छ ?
हो, एकदमै गाह्रो छ । नवरसहरूमा हाँस्ने र हसाँउने विधा सबैभन्दा गाह्रो विधा हो । दर्शकलाई हसाउँनकै लागि कलाकारले दुःख गरेको हुन्छ । स्टेज प्रोग्राममा दर्शकहरु हाँसिदिनुहुन्छ भनेर धेरै मिहेनत गर्छौ तर कहिलेकाही दर्शक नहास्दा खल्लो लाग्छ ।
कार्यक्रमका लागि कुन–कुन देश जानुभएको छ ?
मलेसिया, दुबई, जापान, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनीलगायत १५ भन्दा बढी देशमा पुगेको छु ।
स्टेज कार्यक्रममा दर्शक कुन देशमा चाहिँ धेरै पाउनुभयो ?
नेपाल कलाकार आएको भनेपछि प्रायः सवै देशका कार्यक्रममा बाक्लो उपस्थिति हुन्छ । अझ बढी चाहिँ मलेसिया, दुवई, कतारमा हुन्छ ।
कलाकारिताको कमाईबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
रुचीको विषयमा काम गरिरहेको छु । त्यसैले म सन्तुष्ट छु । दर्शकको माया छ । मान्छेहरू कलाकारिता गरेर खान पुग्छ र भन्छन । राम्रो काम गर्नेलाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गाह्रो छ ।
तपाईलाई मन पर्ने हाँस्यकलाकार को ?
मलाई मनपर्ने हाँस्यकलाकार हरिवंश दाई (हरिवंश आचार्य) हो । उहाँको प्रोग्रामहरू बच्चैदेखि हेरेको छु ।
मनपर्नुको कारण चाहिँ ?
उहाँसँग सिक्नुपर्ने धेरै चीज छन् । उहाँको एक्टिङ गर्ने शैली मनपर्छ । उहाँ धेरै क्यारेक्टरमा एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ । समसामयिक बिषयवस्तुलाई मिलाएर कथावस्तु बनाउने र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने उहाँको शैलीबाट म प्रभावित छु ।
तपाईको भावी योजना के छ ?
अहिले सिताराम दाईले मेरी बास्सै छाडेपछि राजु पौडेल (राजु मास्टरसाब) र म भएर स्क्रीप्ट लेख्नेदेखि सबै म्यानेजमेन्ट गर्ने गरेका छौँ । अहिले यतै व्यस्त छु । यसलाई निरन्तरता दिईरहेका छौँ । बिस्तारै फिल्मको लागि पनि तयारी गर्दैछौँ ।
दर्शकका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कस्ता आउँछन् ?
रमाईलो गर्नुभयो, राम्रो छ भन्ने नै प्रतिक्रिया आउँछन् । हाम्रा प्रस्तुती सबै देशभक्तिपूर्ण नै हुन्छन । त्यसैले पनि राम्रो प्रतिक्रिया आएको हुन सक्छ ।
हाँस्यकलाकार भएपछि मनमा पीडा बोकेर पनि दर्शकलाई हसाउनुपर्छ । तपाईको भोगाइ पनि त्यस्तो छ कि ?
भोगाई सबैको आ–आफनो हुन्छ । तर, म खुःसी छु । कहिलेकाही वास्तविक जीवनमा दुःख भइरहेको बेलामा पनि हाँस्नैपर्नै हुन्छ, हसाउँनैपर्ने हुन्छ । किनभने हाम्रो पेशा नै यस्तो छ । पेशामा रमाउनैपर्छ ।
यो भिडीयो पनि हेर्नुस ।